Roulette nkata vidiyo - nkwurịta okwu na-enweghị oke 24/7
Nkata nkata vidiyobụ oghere meberen'efuebe ị nwere ike ịkparịta ụka n'ụzọ dị mfe gịna ụmụ agbọghọna ụmụ nwoke nọ n'ọnọdụ mmekọrịta dị iche iche sitere na mba 197 nke ụwa.Iji chọta interlocutor, ọ dịghị mkpa ka ị na-ahapụ gị mma n'ụlọ, o zuru ezu ịnweta Ịntanetị.
Weebụsaịtị Chatroulettena -ewepụtapụtaechiche izizi nke ọrụ ọgbara ọhụrụ maka ọbụbụenyi na nzikọrịta ozi na-enweghị oke ala ma ọ bụ afọ.Ị nwere ike isonye na mkparịta ụka n'oge ọ bụla nke ụbọchị na 100% chọta onye na-atọ ụtọ.
Ụkpụrụ nke ọrụ nke online video chat roulette
Kpọtụrụ ndị ọrụ ndị ọzọ na-ewere ọnọdụ kpamkpam na sava anyị.Ikike ya nwere ike iguzogide nnukwu nnabata nke ndị ọbịa.A na-eme roulette nkata vidiyonantanetị, na-enweghịndebanye ahaogologoyanan'efu.Sistemu na-egosiputa vidiyo onye ọrụ ma na-enye ohere ịnweta kamera weebụ.
A na-ahọrọ interlocutor na-akpaghị aka, nke a bụ ụdị "Russian roulette".Iji mee nke a, a na-eji usoro nke ọnụọgụ ọnụọgụ, mgbe nke a gasịrị, a na-eme njikọ ozugbo.Nkà na ụzụ a anaghị eji sava dị ka ndị na-emekọrịta ihe.N'ihi nke a, ọ gaghị ekwe omume ịchọta ebe ndị ọbịanke roulette chat online.Ọrụ ahụ na-eji nchọta enweghị usoro, na-enye nzikọrịta ozi, ọ chọghị nbudata ndị ọkwọ ụgbọala.
Ihe mgbakwunye "gbakwunyere" nke usoro ahụ bụ na ọ dịghị mkpa ka ị tinye ozi nkeonwe ọ bụla, ịkwesighi igosi "e-mail" ma ọ bụ jiri "aha njirimara", ihe niile na-eme mgbe ịpịrị abụọ gasịrị. bọtịnụ ọrụ.
Kedu ihe kpatara ị ga-eji chọọ roulette nkata vidiyo na-enweghị ndebanye aha?
Chọta ndị enyi / ndị enyi.Ọrụ, ọmụmụ ihe, ihere banal adịghị ekwe ka ị chọta ezigbo enyi?Nkata nkata vidiyobụ ohere ịmalite nkwurịta okwu enyina ụmụ agbọghọma ọ bụ ụmụ nwoke na-enweghịndebanye aha.Nhọrọ a nke ịchọta enyi dị irè karị, n'ihi na.na-enye gị ohere ịghara ịgbachitere okirikiri naanị ndị ọrụ ibe, ụmụ akwụkwọ ibe ma ọ bụ ndị enyi, enwere ọtụtụ puku ndị na-eme ntuli aka n'ihu gị.Na ọnọdụ na-amaghị aha, ọ dị mfe karị 'imeghe', merie ihere nwere ike ime ma chọta onye ghọtara gị nke ọma.
Chọta "mkpụrụ obi" gị.Nkata nkata vidiyona-enye gị ohere ọ bụghị naanị ka gị nanwa agbọghọmaramma ma ọ bụ nwa amadi nwere obi ikena-akpakọrịtan'ịntanetị, kamakwa ịmata ha n'oge mkparịta ụka na-akparaghị ókè.Ohere magburu onwe ya iji mụọ onye ị họọrọ site na "A" ruo "Z" tupu enwere ike inwe nzukọ na-anọghị n'ịntanetị.N'ime ọgba aghara nke ndụ nke oge a, ụzọ dị mfe iji chọta missus dị ngwa ngwa ma dị mfe karịa na ụwa n'ezie.Ihe mgbakwunye ego - "ụbọchị" nwere ike ịkwụsị n'oge ọ bụla, na-ekele enyi nwoke / enyi nwanyị na-achọsi ike ruo mgbe ebighị ebi.
Mata ndị mba ọzọ.Mkparịta ụka vidiyobụ ọrụ na-enweghị mgbochi naọdịdị ala nke nkwurịta okwu, ị nwere ike ịkparịta ụkan'efuna n'ime sekọnd na ndị bi na agbata obi ma ọ bụ mba ọzọ.Na mgbakwunye, nke a bụ ohere dị ukwuu ịmụta asụsụ mba ọzọ ma ọ bụ kwalite nkà ị na-asụ, na-eji ọ bụghị akwụkwọ ọgụgụ ma ọ bụ ịntanetị, kama site n'aka onye na-asụ asụsụ.Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ịchọrọ, ị nwere ike ịga njem, na-amara na na obodo na-amaghị ama e nwere onye ga-ezute ma mee njem nleta na-echefu echefu.
Chatroulettebụnkata vidiyo dị n'ịntanetịkpamkpam maka ịmara ogologo oge ma ọ bụ obere oge, nwoke ma ọ bụnwanyịna-akpa ọchị ma ọ bụ dị mfe .A na-ejikwa ya mgbe naanị ịchọrọ ịgwa mmadụ okwu ma nweta nkwado omume.Ọ na-adịkarị mfe ịhazi ọnọdụ dị nro site n'enyemaka nke onye ọbịbịa karịa onye ikwu.Amaghị aha bụ nkwa na ị nwere ike ikwurịta isiokwu "ọkụ" n'agbanyeghị ihere.
Kedu ka esi amalite nkata vidiyo na-enweghị ndebanye aha?
PC, mbadamba nkume ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ ị nwere ike jikọọ kamera weebụ;
oge efu makankata vidiyo n'ịntanetị naụmụ okorobịa,ụmụ agbọghọ.
Ihe dị mkpa nuance.Ị nwere ike kparịta ụka na-enweghị igwefoto site na iji mpaghara "Ozi dee ebe a".
Ntọala ọrụ nwere nghọta, ọbụlagodi maka ndị mbido na-esonyebeghị na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-atọ ụtọ.Usoro a ga-ahọrọ ndị ga-eme egwuregwu maka ihe egwuregwu na-atọ ụtọ na 2-3 sekọnd.
Mkparịta ụka vidiyo efu n'ịntanetịga-amalitena-enweghị ndebanye aha, mgbe onye ọbịa gasịrị:
gaa na webụsaịtịChatroulette;
pịa bọtịnụ "Kwado kamera weebụ";
ga-aza arịrịọ ahụ "Kwado ihe ọkpụkpọ ọkụ" nke ọma;
pịa bọtịnụ "Malite ịchọ enyi".
Mgbasa ozi nke ndị chọrọ ịkparịta ụka na-amalite.Ị nwere ike ịkwụsị na nke mbụ n'ime ha ma ọ bụ "tụgharịa" site na ịpị "ọzọ".Ụdị dị otú ahụ adịghị amanye gị ime ka gị na onye na-emekọrịta ihe na-ahụghị n'anya mara, nhọrọ ikpeazụ na-adabere naanị na gị.
Kedu onye bụ ọrụ Chatroulette maka?
chọrọ ịmata ma ọ na-atụ egwu/ihere ime ya "dị ndụ";
na-arụsi ọrụ ike, enweghị oge efu iji chọta ndị enyi / onye ị hụrụ n'anya;
na-ahọrọ usoro nzikọrịta ozi ọgbara ọhụrụ, pụrụ iche;
na-achọ ụzọ na-adịghị mkpa iji nọrọ "nkeji" n'efu.
Na kwa maka ndị nọ n'afọ ndụ niile, ọrụ, okpukperechi na echiche gbasara ndụ.Enweghị "njikwa ihu" ma ọ bụ uwe amanyere iwu maka ịpụ apụ.Ị kpebiri iji igwefoto na igwe okwu ma ọ bụ kparịta ụka.
Uru nke ọrụ Chatroulette
Iji usoro mkparịta ụka a dị mma ma dị mma.Isi uru nkenkata vidiyo roulettebụ ọnọdụntanetị, jirin'efuna ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na-akparaghị ókè, ị nwere ike ịkparịta ụkana ụmụ agbọghọma ọ bụ ụmụ nwoke.
100% "nzuzo".Enweghị ndebanye aha ebe a, ọ nweghị ozi agaghị achọ n'aka gị, ọbụlagodi ụlọ akwụkwọ elementrị dee aha ma ọ bụ ozi-e.
Nkwukọrịta 24/7.Ịnweta saịtị ahụ dị n'oge ọ bụla n'ụbọchị, n'agbanyeghị ụbọchị izu ụka ma ọ bụ izu ụka, oge ọrụ ma ọ bụ ezumike.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-enweghị oke.N'ihina online video chat roulette, okike nke ndị ọbịa, ọnọdụ ha, nhọrọnkenwa agbọghọma ọ bụnwoke ị ga-akparịta ụka adịghị mkpa.
Ọ dị mfe iji.Ọ dịghị mkpa ibudata na wụnye software pụrụ iche, ihe niile na-eme "dị ndụ", na video mgbasa ozi mode.
Nhọrọ ngwa ngwa nke ndị na-aga ime.A na-ahazi algọridim usoro ahụ n'ụzọ iji gosipụta ndị ọhụrụ chọrọ ịkparịta ụka na ihuenyo gị n'ime sekọnd ole na ole.
Onye ọrụ na-emepe ụwa dum, maka ọmụmụ ihe nke onye na-adịghị mkpa ịchekwa ego maka njem ogologo oge, "wepụ" oge n'etiti ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ.Ị nwere ike ịkparịta ụka na ndị nnọchiteanya nke mba dị iche iche ebe a na ugbu a.
gbasaa echiche gị na ọdịdị ala nke ndị maara;
nwekwuo ùgwù onwe onye ma wepụ ihe mgbagwoju anya na nkwurịta okwu;
chọta "multi-format" interlocutors maka mkparịta ụka na isiokwu ọ bụla;
ị ga-enwe ike "ilekọta" mmadụ maka mmekọrịta ịhụnanya;
Jiri oge ezumike gị na-erite uru, na-akpali akpali, ihe ọhụrụ na-akpali akpali.
Bidoroulette nkata vidiyo naụmụ nwoke ma ọ bụụmụ nwanyịnke ọrụ ọ bụla na afọ 100%n'efunaenweghịndebanye ahana-enweghị isiugbu a.
Gịnị bụ chatroulette?Ọktoba 13, 2022, 20:41
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ihe a na-akpọ nkata roulette enwetawo nnukwu ewu ewu na Ịntanetị.Nke a bụ ụdị ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị, mana ọdịiche dị n'etiti roulette chat na ebe mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-akpa mgbe niile bụ na ebe a mmadụ anaghị ahọrọ onye na-emekọrịta ihe.Usoro ahụ n'onwe ya na-ahọrọ onye na-emekọrịta ihe na-adabereghị na algọridim ndị ọrụ ya.Onye ọrụ n'onwe ya nwere ike ịhọrọ naanị okike na afọ nke onye na-emekọrịta ihe n'ọdịnihu.
Enwekwara nkata vidiyo ọha.Mgbasa ozi nkata vidiyo roulette dị maka onye ọ bụla nọ na saịtị http://rt.ruletka-888.com/.Enwere nnukwu nhọrọ nke ndị mmekọ dị iche iche maka nkwurịta okwu.N'oge a, ihe karịrị 1000 ndị mmadụ debanyere aha na saịtị ahụ, ndị ga-enwe obi ụtọ izute enyi ọhụrụ.Maka ịdị mma nke ndị ọrụ, na mgbakwunye na nkata a na-emebu, e mekwara nkata vidiyo ka ndị na-emekọrịta ihe wee hụ ibe ha, nkwurịta okwu na-adịkwa ndụ ma dị jụụ.
Kedu ka chatroulette si arụ ọrụ?
Debanye aha na saịtị ma dejupụta nkọwa gị
Malite nkata vidiyo wee chere ka sistemụ họrọ onye na-emekọrịta ihe ka gị na ya kparịta ụka.
Kpaa nkata dịka ịchọrọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgwa onye ọzọ okwu, wee pịa bọtịnụ "ọzọ" na ọrụ ahụ ga-ahọrọ onye ọzọ maka mkparịta ụka ahụ.Enwere ike ime nke a ugboro ole na ole na-enweghị ngwụcha.Mgbe ụfọdụ, a na-emegharị ndị na-emekọrịta ihe, mana nke a na-eme nke ukwuu adịkarịghị.
Ozugbo ị debanyere aha, a na-atụ aro ka ibudata ngwa mkpanaaka pụrụ iche.Ọ dị mfe karịa ụdị saịtị ahụ n'ịntanetị, ebe ọ bụ na emebere ngwa ahụ nke ọma ma nwalee ịrụ ọrụ na ekwentị mkpanaaka.Ọzọkwa, site n'enyemaka nke a mobile ngwa, ị nwere ike na-enweta ngosi site interlocutors ozugbo na ekwentị, n'ihi ya, ị dịghị mkpa na-akparịta ụka mgbe niile na-eso mmelite.
Ekwesiri iburu n'uche ozugbo na ọrụ a dị naanị maka ụmụ amaala rurula afọ 18.Maka ndị ọzọ, a kpọchiela ịnweta ọrụ ahụ, n'ihi na ọ nwere ike ịnwe ọdịnaya achọghị.Ị nwere ike ịgụkwu gbasara usoro ojiji nke ọrụ na iwu omume maka ya na ngalaba "usoro ojiji".Nkwurịta okwu na-aga nke ọma!
Ezigbo ọbịa!Ọrụ nke saịtị ahụ na-achọ mgbalị dị ukwuu, oge na ihe onwunwe, ya mere, ọ bụrụ na-amasị gị ọrụ anyị ma na-achọ ka ọ nọgide na-adị, ị nwere ike na-enye gị onyinye n'ụdị nke obere onyinye.Ị nwere ike inye onyinye na kaadị Sberbank: 4817760251202287Anyị ga-enwe obi ụtọ maka enyemaka ọ bụla.Daalụ!))
Chatroulette kacha mma n'ịntanetị
Ị kparịta ụka na netwọk mmekọrịta agwụla gị, mana ị nwalebeghị chatroulette?Ị chọrọ ikiri webcam dị ndụ wee soro ndị ezigbo mmadụ kparịta ụka?Mgbe ahụ ị ga-enwe mmasị na ụzọ nkwukọrịta ịntanetị a!
Nke a bụ ngwá ọrụ dị mma maka ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa na-ahọrọ ịgbachi nkịtị na ụlọ ọrụ ndị na-eme mkpọtụ.N'ime ọha mmadụ nke oge a, e nwere ọtụtụ ndị nwere ike ịme mkparịta ụka na ndị bịara abịa na ndụ n'ezie, ma n'otu oge ahụ, ha na-enwe mmetụta dị oke mgbu na-enweghị nkwurịta okwu na nkata roulette e mere iji dozie ọnọdụ a.
N'ileghachi anya n'èzí na akụrụngwa vidiyo a, ị ghọtara ihe mere eji kpọọ ya roulette nkata (aha ndị yiri ya: roulette roulette, ru roulette, roulette 18, roulette chat, roulette Russian).A sị ka e kwuwe, ndị enyi ịntanetị a na-ejikọta ihe abụọ: nkata na egwuregwu roulette a ma ama.Naanị mmasị niile nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị a na-adịghị ahụkebe bụ eziokwu na nke a bụ nkata vidiyo!Ya bụ, ị na-ezute onye na-emekọrịta ihe na-enweghị ihe ọ bụla na-ele anya, ma ọ bụrụ na ị chọghị ya, pịa bọtịnụ ahụ wee gaa na onye ọbịbịa ọzọ.
Mkparịta ụka vidiyo a na-ewu ewu na Europe (England, Germany, France, Italy, Spain, Switzerland, wdg), na USA (America), Mexico, China, nakwa na mba CIS (Russia, Ukraine, Belarus). .Nke a abụghị ihe ijuanya, n'ihi na ụdị nkata roulette a na-adọrọ mmasị.
Ọtụtụ nde ndị ọrụ taa na-ewere mkparịta ụka chatroulette ka ọ kacha mma yana n'ọtụtụ ọnọdụ usoro nkwukọrịta kacha adaba.Ma nke a na-egosi n'ezie na iji ndị ọgbọ dị iche iche nke ụzọ ịntanetị nke oge a maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-ezute ozugbo bụ ezigbo nhọrọ maka netwọk mmekọrịta.
Wirt chat roulette - 1000 ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa na-achọsi ike ka gị na ha kparịta ụka
Ọ baghị uru ma mmadụ chọrọ naanị mkparịta ụka na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ma ọ bụ na-achọ onye mmekọ maka ezi mmekọrịta na mmekọrịta siri ike - na nkata roulette na ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa Russia, yana ndị mba ọzọ, onye ọ bụla nwere ike izute enyi na ịhụnanya. nke ndụ.
Ọtụtụ ndị anaghị enwe ike iso onye ha masịrị kparịta ụka n'okporo ámá, n'ebe ọrụ ha aghaghị ime ihe kwekọrọ n'ihe oyiyi a na-anabatakarị.Ihe ndị a niile na-agbakọta na subconscious na-eduga n'eziokwu na mmadụ na-aghọ onye njide nke egwu na nghọtahie n'ozuzu, ebe a na-ahụ roulette dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị ụzọ isi na ọnọdụ a.
Yabụ kedu ihe ị ga-eme n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ?Otu esi ewepụ owu ọmụma na ebe ị ga-ahụ onye gị na ya nwere ike ọ bụghị naanị ịnụ ụtọ nkwurịta okwu, kamakwa guzobe mmekọrịta dị ogologo?
N'iburu n'uche ohere na-enweghị njedebe nke usoro nkwurịta okwu ịntanetị nke oge a, ọ gaghị ekwe omume ichefuuru 5 a na-apụghị ịgbagha agbagha maka ndị ọrụ roulette nkata:
Dị mfe na ngwa ngwa.Saịtị roulette na ngwa nkata na ụwa bụ n'efu na anaghị achọ ndebanye aha.Naanị pịa bọtịnụ "mmalite", sistemụ ahụ ga-ahọpụtara gị otu enyi ozugbo;
Ndị enyi enweghị usoro.Ihere na-eme ụfọdụ ndị nọ na mkparịta ụka vidiyo ime ihe mbụ, na-eche na n'ụzọ dị otú a, ọ ga-adị ha ka a manyere ha ike.N'ebe a, ị maghị onye ị ga-eduzi mkparịta ụka.Ọ bụrụ na ịbanye na nkata vidiyo, ị ga-ahụ onye n'akụkụ nke ọzọ nke ihuenyo nke na-achọkwa ndị enyi ma dị njikere kpamkpam ọ bụghị nanị iji kparịta ụka, kamakwa iji guzobe kọntaktị anya na onye na-ege ntị magburu onwe ya;
Ọ dị mma izute ma kwuo nke ọma.Ọ bụrụ na ị ghọtara site na nkeji mbụ nke nkwurịta okwu na onye na-emekọrịta ihe adịghị adọrọ mmasị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ na-eme omume na-ekwesịghị ekwesị, mgbe ahụ na-enweghị nkọwa ọ bụla ma ọ bụ ịrịọ mgbaghara, pịa bọtịnụ "ọzọ", a ga-agbanye gị na onye na-ege ntị ọhụrụ;
Nzukọ a na-eji kamera weebụ eme.Na nkata a, na-enweghị nbudata, ị nwere ike ịhụ ozugbo ma nụ onye na-emekọrịta ihe, nke dị irè karịa akwụkwọ ozi na netwọk mmekọrịta, ebe ndị ọrụ na-etinyekarị ozi na-adabaghị na eziokwu kama ịbụ ezigbo foto.Ịmata kamera weebụ dị mfe karịa;
Na-ewepụ owu ọmụma na ike ọgwụgwụ.Ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike ịgwa ndị ikwu ma ọ bụ ndị enyi ya nsogbu ndị na-egbu mgbu.Na nkata roulette iyi ị nwere ike ọ bụghị naanị ịkọrọ enyi ọhụrụ gị echiche, kamakwa ịchọta onye òtù ọlụlụ nwere otu ụkpụrụ ndụ.
World Chatroulette - saịtị nke na-agaghị ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị
Ọtụtụ mgbe ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa na-achọ ịgbanwe ndụ ha na-amalite ịchọ ndị enyi ọhụrụ na netwọk mmekọrịta, nke na-adịghị enye mgbe niile ihe ha chọrọ.E jiri ya tụnyere chatroulette, ọ na-esiri gị ike ịchọta ndị enyi ọhụrụ n'ebe ahụ, ebe ọ bụ na ị pụghị ijide n'aka na onye nke ọzọ nọ.Nhọrọ nke abụọ nke ndị mmadụ na-ahọrọkarị bụ ịkparịta ụka n'ịntanetị na ezigbo ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke, nke na-aghọwanye ewu ewu kwa ụbọchị.
Ihe ewu ewu nke nkata vidiyo ndụ Russia na-eto eto n'ihi ọtụtụ uru na-ekewa ya na nhọrọ ọ bụla ọzọ.Ụzọ a pụrụ iche nke ịchọta ndị ọhụrụ na-adọta ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ nwere ikuku na-adọrọ adọrọ na ihe dị ịtụnanya, nke na-eme ka akwara ahụ dị ụtọ ma na-agbakwụnye ose na ndụ kwa ụbọchị.
Ihe na-adọrọ mmasị na ihe a niile bụ na cha cha cha cha ugbu a ọ bụghị nanị na-enyere ndị mmadụ aka inwe ntụrụndụ na ịmara ibe ha, kamakwa na-enyere aka ịmepụta ezinụlọ, n'agbanyeghị otú ọ ga-esi ada ụda.N'ihi nke a, ọtụtụ ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye bụ ndị na-adịghị achọta oge na ohere ịchọta mkpụrụ obi ha n'ụzọ dị egwu nke ndụ nke oge a na-enweta obi ụtọ ha.
Chatroulette na ihe nchọgharị - mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na nkwurịta okwu n'otu pịa
Teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-agbanwe ụwa ma melite ụdị nzikọrịta ozi niile.Taa, ekele maka chatroulette na ndị mba ọzọ na ndị Russia, ndị mmadụ nwere ike ịkparịta ụka na ibe ha na-ahapụghị ụlọ ha ma chọta ndị ọbịbịa na-enweghị usoro n'otu pịa.Ugbu a onye ọ bụla nwere ike iri uru nke ebe a nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ na-achọ ọhụrụ ahụmahụ na-achọ bara uru na-eji oge na ndị enyi ọhụrụ.
Na mgbakwunye, roulette na-akpali akpali na ihe nchọgharị Yandex bụ ụzọ ọgbara ọhụrụ iji chọta ndị ọhụrụ, ebe a na-ekpebi ihe niile site na ohere.Ọ bụrụ na ike gwụ gị nke usoro ihe omume ma ọ bụ na-eche owu ọmụma, mgbe ahụ ọ bụ n'ezie oge maka ịbanye n'ime ikuku na-akpali akpali nke ịkpa nkata roulette na ndị ọbịa na-enweghị usoro.Kwere m, ọ na-esiri ike ịchọta ihe na-adọrọ mmasị karị, ma n'otu oge ahụ dị mma, ụzọ ị ga-esi kwurịta okwu na onye dị adị.
Ọ bụrụgodị na ọ dịtụbeghị mgbe ị gbalịrị iso ụmụ agbọghọ mara mma na-akparịta ụka, ikekwe ị nụla banyere ụzọ dị mma na nke a ma ama nke izute ndị ọhụrụ, ime enyi na ọbụna ịmepụta mmekọrịta ịhụnanya.Gbalịa chatroulette site na igwefoto wee hụ ka ọ dị mfe ịgbanwe ndụ gị kwa ụbọchị wee bụrụ onye obi ụtọ karịa.
Gịnị kpatara roulette chat Russia ji ewu ewu?
Nke bụ́ eziokwu bụ na chatroulette na-eme ka o kwe omume ikpori ndụ.Nke a bụ ihe roulette cha cha webụ na-enye gị n'enweghị ndebanye aha yana n'efu kpamkpam:
Ọ bụrụ na ị maghị otú e si enweta obi ike izute onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe gị ná ndụ a na-adị kwa ụbọchị, i nwere ohere pụrụ iche iji ohere nke onye gị na ya na-akpakọrịta n’akparịta ụka vidio a mee ihe.
Chatroulette ga-enyere gị aka ịmalite mkparịta ụka dị mfe, mana n'otu oge ahụ na-akpali akpali gị na onye na-emekọrịta ihe.
Egwuregwu roulette na-emebu, mgbe ị nọdụrụ ala tụgharịa ndị na-emekọrịta ihe na-enweghị usoro wee malite mkparịta ụka gị na onye masịrị gị.
N'ebe a, ị nwere ike kekọrịta mmasị gị, yana mmasị onye na-emekọrịta ihe na ikike gị ịkpọ ụbọ, ịgụ abụ, wdg.
Ọ bụ ihe na-adịghị ahụkebe, mana ọ bụ eziokwu: ụfọdụ na-ejikwa ịtụ aro na chatroulette!- maka ịlụ ụmụ agbọghọ na-enweghị ndebanye aha.
N'ezie, ndepụta a nwere ike ịga n'ihu ruo mgbe ebighi ebi, n'ihi na echiche efu ndị mmadụ anaghị akwụsị :)
Chatroulette emeela ka ndị mmadụ na ndị ha na-amabughị kparịta ụka ozugbo.Ọtụtụ ndị mmadụ amabeghị maka nke a, n'ihi na enweelarị analogues ole na ole nke roulette nkata (Ru roulette, roulette chat Russian, wdg).
Mkparịta ụka KuMit - roulette nkata vidiyo adịchaghị maka gị na ụmụ nwanyị na-akpa n'ịntanetị
Ụwa na-agbanwe ngwa ngwa karịa ka anyị nwere oge ịhụ ya.Ọrụ ọhụrụ pụtara na ndị ochie na-abanye n'oge gara aga, ịntanetị nwere ike dochie ụlọ akwụkwọ, mahadum ma ọ bụ nkuzi agụmakwụkwọ, na netwọk mmekọrịta na ndị ozi ozugbo aghọwo akụkụ dị mkpa nke ndụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla.
Mana enwere ihe dị n'ọgba mmiri a nke na-agbanwebeghị kemgbe ọtụtụ puku afọ.Nke a bụ mkpa onye ọ bụla n'ime anyị na nkwurịta okwu, ịchọ ezi ndị enyi na onye mkpụrụ obi.Ọgwụgwụ na-anọgide otu, naanị ụzọ iji nweta ya na-agbanwe.
Otu n'ime ngwaọrụ ndị a bụ nkata vidiyo n'ịntanetị.Ọ bụrụla usoro a ma ama maka ihe karịrị afọ iri ugbu a.Ọ bụ ezie na ekwesịrị ịsị na ọ bụghị mkparịta ụka weebụ nke oge a na-agbaso ụkpụrụ na ihe ndị a chọrọ ugbu a.Ọtụtụ cha cha cha cha enweghị ike ịnya isi maka imeru ihe n'ókè, ndị na-ege ntị na-arụsi ọrụ ike, ma ọ bụ ịdị mfe iji.Otú ọ dị, a ka nwere ndị ọzọ.Otu n'ime ha bụ nkata vidiyo Russia CooMeet.Nke a bụ ikpo okwu dị mma maka nkwurịta okwu na onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya, mkpakọrịta nwoke na nwanyị nkịtị na ịchọta onye òtù ọlụlụ.Na ezigbo imeru ihe n'ókè na ọrụ enweghị atụ na-eme ka mkparịta ụka vidiyo a na ụmụ agbọghọ bụrụ otu n'ime ụdị kachasị mma.
Mkparịta ụka vidiyo CooMeet Premium bụ ọrụ a na-emeziwanye ma na-etolite ka ọ bụrụ nke kacha mma n'etiti nkata kamera weebụ.Ma nke a, n'ezie, chọrọ ego.Anyị nwere ike ịkwasa saịtị ahụ yana mgbasa ozi yana ọkọlọtọ mmapụta n'oge oku iji nweta uru na ya.Mana ọ ga-abụ ezighi ezi n'ihe gbasara ndị ọrụ.
Ya mere, ewebata CooMeet Premium, nke maka obere ego na-enye gị ohere ịnụ ụtọ uru na atụmatụ niile nke saịtị ahụ.Nke a mere ka o kwe omume ịmepụta ọrụ dị oke elu n'ezie:
ọkwa kachasị elu nke nchekwa na nzuzo;
nke ọma imeru ihe n'ókè 24/7;
enweghị bots na adịgboroja zuru oke na saịtị ahụ;
mgbe niile magburu onwe video na ụda àgwà;
ngwaọrụ dị mma maka ịchọta ndị interlocutors kwesịrị ekwesị.
Nke kachasị mma, ịnwere ike iji CooMeet n'efu n'oge oge ikpe.N'okwu a, ị ga-enwe ike ịnweta ọrụ niile na ohere nke ịkparịta ụka vidiyo na ndị bịara abịa.Ma ugbua na njedebe nke oge efu, gị onwe gị na-ekpebi ma ị ga-azụta ohere adịchaghị ma ọ bụ na ị gaghị azụta.Ma ị pụghị ọbụna inwe obi abụọ - ọ ga-amasị gị!
Njehie mgbe ị na-achọ nkata roulette KuMit
Isi mmejọ bụ enweghị akpachapụ anya mgbe ị na-abanye aha CooMeet chatroulette.Dịka ọmụmaatụ, e nwere ụdị typos: comeet, coomet, coomet, coomet, coomee, coomate, coomet, coomeeet, coomet, coomet, comeet chat na ihe ndị ọzọ.Gịnị bụ ihe ize ndụ?
N'ọtụtụ ọnọdụ, ị gaghị ahụ saịtị ahụ na nchọta, mana Google ga-aghọta ihe ị na-ekwu wee nye gị njikọ ziri ezi.Mana n'ọnọdụ kachasị njọ, ị na-agba ọsọ n'ihe ize ndụ nke ịbanye na saịtị nke ndị aghụghọ na-eji aha dị ka CooMeet n'ịntanetị.Ma nke a bụ ebe nsogbu ndị ka njọ pụrụ ịmalite.
Ndụmọdụ!Lelee adreesị weebụsaịtị CooMeet na-asụpụta n'ụzọ nkịtị site na leta.N'otu aka ahụ, lelee anya maka ngwa nkata CooMeet n'ịntanetị na ụlọ ahịa ngwa iOS ma ọ bụ gam akporo.
Cheta na CooMeet abụghị naanị roulette nkata Russian.Ikpo okwu anyị na-arụ ọrụ n'ọtụtụ mba ụwa.Ị nwere ike ịhọrọ obodo gị ozugbo na saịtị dị na ala - saịtị ahụ ga-egosipụta ozugbo n'asụsụ kwesịrị ekwesị maka ịdị mma gị.
Kedu ka esi amalite iji nkata vidiyo?
Ihe niile dị nnọọ mfe:
1. Ị na-aga na weebụsaịtị CooMeet wee pịa bọtịnụ ịmalite chatroulette.
2. Ezipụta okike gị wee kwenye na amụma nzuzo.
3. Nye saịtị ahụ ohere ịnweta kamera weebụ na igwe okwu gị, wee malite ịkparịta ụka na ndị ọrụ enweghị usoro.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ gị na saịtị ahụ, usoro ahụ ga-enye gị ka ịdebanye aha ma nweta nkeji efu maka ịkparịta ụka na ụmụ agbọghọ na roulette nkata.Anyị na-adụ ọdụ ka ị were uru nke a mara mma bonus.
Site n'ụzọ, na ntọala nkata ị nwere ike ịhọrọ otu ịchọrọ ịkparịta ụka - site na vidiyo ma ọ bụ nkata ederede.Na ngọngọ "Ozi", ị nwekwara ike ịkpọtụrụ nkwado teknụzụ ozugbo wee nweta enyemaka na ọrụ gị.
Ọ bụrụ na nkwurịta okwu gị na otu onye anaghị ejikọta, ị nwere ike ịgbanwe gaa na nke ọzọ n'otu ọpịpị.Ya mere, naanị otu mgbede ị nwere ike izute ọtụtụ ndị na-adọrọ mmasị, chọta ezi ndị enyi na ọbụna onye òtù ọlụlụ.Zute, kparịta ụka na isiokwu ọ bụla, hazie nzukọ na ndụ n'ezie wee malite mmekọrịta ọhụrụ n'egbughị oge!
Ndụmọdụ maka iji nkata vidiyo enweghị usoro
Nwee nkwanye ùgwù na ndidi, akparịla ndị gị na ha na-akpakọrịta ma na-akpa àgwà ọma n'ebe ha nọ.Ndị a bụ iwu kachasị mkpa nke nkwurịta okwu ọ bụghị naanị na chatroulette online, ma n'ozuzu na Ịntanetị.Mana enwere ndụmọdụ ole na ole bara uru maka nzikọrịta ozi na chatroulette n'ịntanetị:
1. Hazie kamera weebụ gị na ọkụ.Jide n'aka na ihe oyiyi si na igwefoto gị doro anya, nakwa na a na-eduzi ya kpọmkwem na gị, ọ bụghị na tebụl ma ọ bụ ebe ọzọ.
2. Lezienụ anya na ụda olu.Igwe okwu ọjọọ nwere ike imebi nzikọrịta ozi niile.Ọ bụrụ na ụda sitere na ya adịghị mma, ọ ka mma ịzụta nke ọhụrụ.Ọbụna ụdị mmefu ego ga-eme.
3. Kpọọ ndị ọrụ mebiri iwu CooMeet.Anyị na-agbalị nyochaa omume na-adịghị anabata ma machibido ndị na-emebi iwu n'oge.Ma site n'enyemaka gị, usoro nhazi ahụ na-adị ngwa ngwa ma dị irè karị.
4. Tupu ịmalite nkwurịta okwu, tinye ihe n'usoro gburugburu gị - n'ụzọ dị otú a, ị ga-ele anya nke ọma na nke ọma n'anya onye na-emekọrịta ihe.Wepụta 5 nkeji ihicha - ị gaghị akwa ụta ya.
5. N'oge mkparịta ụka, gbalịa ile anya ọ bụghị naanị na ihuenyo, kamakwa na kamera weebụ.Yabụ na onye na-emekọrịta ihe ga-enwe mmetụta na ị na-ele anya na anya.Nke a na-enyere aka ime ka kọntaktị dị mma.
Na nke kachasị mkpa, jiri mkparịta ụka CooMeet na-atọ ụtọ, kparịta ụka, chọta ndị na-atọ ụtọ ma nọgide na-adị mma.Nke a bụ isi iwu nke ịga nke ọma na chatroulette ọ bụla!
Gịnị bụ chatroulette?
Ị nwere ike mụtakwuo maka otu Chatroulette si arụ ọrụ n'ịntanetị site na isoro njikọ dị na webụsaịtị.
Mkparịta ụka ahụ nwere interface mara mma.Ebe nchekwa data nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị debanyere aha.Ma ọ dịghị mkpa ka ị chọọ nke ziri ezi n'ime ha.Mkparịta ụka ga-ahọrọ gị onye na-emekọrịta ihe.Nkwurịta okwu site na igwefoto ga-enye gị ohere ịbịaru onye ọ bụla nso nso.Ụdị ahụmahụ ị ga-enweta, ị gaghị echefu.Ị nwere ike ịgwa onye gị na ya na-akpakọrịta ihe na-atọ ụtọ banyere onwe gị ma ọ bụ mụta ọtụtụ ihe gbasara ya.Chatroulette ga-enye gị ohere ikpochapụ ogige ma bụrụ onye na-emepe emepe.
Ọrụ ahụ agabigala oge ịrị elu pụrụ iche na ọdịda mwute, ma ka na-ewu ewu nke ukwuu n'ubi ya.Akụkụ na-adịghị ike bụ enweghị, n'ezie, njikwa onye ọrụ, n'ihi na site n'oge ruo n'oge uru anatomical "na-ada" na nkata kama ihu nke ndị na-emekọrịta ihe, nke ọ bụghị onye ọ bụla na-amasị.
Ọtụtụ mgbe, onye ọrụ ekwentị na-arụsi ọrụ ike na-ekwurịta okwu na ndị enyi ya, ezinụlọ ya, ndị ọrụ ibe ya site na opekata mpe ndị ozi ngwa ngwa ole na ole, netwọkụ mmekọrịta.netwọk ma bụrụ onye ọbịa na opekata mpe otu nnọkọ, ọbụlagodi na ọ na-eme n'ihi mkpa ọ dị.N'ikwu okwu banyere forums, ọ bụrụ na ị na-atụgharị anya gị ugbu a na aro na ị na-eji ha, cheta nnukwu ihe onwunwe na terabytes nke ọdịnaya mgbasa ozi, ekele nke ndị ohi nwere ihe dị iche iche pụtara.
Kedu ihe bụ Chatroulette?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ndị enyi ọhụrụ ma ọ bụ nwee anụrị, mgbe ahụ ị ga-aga na Chat Roulette.Ọpụrụiche nke nkata a dabere n'eziokwu na ị naghị ahọrọ onye gị na ya na-akpakọrịta.Sistemu na-ahọpụtara gị onye mmekọ ka gị na ya kparịta ụka.Nke a na-akpali mmasị, n'ihi na mgbe ọ bụla ị ga-ekwurịta okwu na ndị ọhụrụ.Ụdị nkwurịta okwu a na-akpali uche ma kpalie mmasị.
Nkwurịta okwu na Chat Roulette na-enye ndị mmadụ ohere ime mgbanwe ngwa ngwa n'ọnọdụ ọhụrụ, iji tọhapụ onwe ha.Ọbụna ndị na-eme ihere na-amalite iso ndị ha na-amabughị na-ekwurịta okwu n'ezoghị ọnụ.Chat Roulette adịghị ka ọtụtụ ụlọ nkata ndị ọzọ.A sị ka e kwuwe, onye na-emekọrịta ihe n'enweghị usoro nwere ike ịgbanwe ndụ gị nke ukwuu ma nye gị mmetụta uche.Mkparịta ụka vidiyo a bụ n'efu.
Naanị ihe ịchọrọ ịkparịta ụka na nkata a bụ kọmputa na ịntanetị dị elu.Ndị ezigbo mmadụ na-ekere òkè na mkparịta ụka, ọ dịghị aghụghọ ebe a.Ọ bụ ya mere ndị na-akpa nkata na-atụ anya mgbe niile.Ndị enyi niile na-adọrọ mmasị na-eme mgbe niile na mberede, ya mere ndị mmadụ ji ahọrọ ChatRoulette.Ị nwere ike imete enyi ọhụrụ ma ọ bụ ọbụna chọta ịhụnanya gị.
Jide n'aka na nkwurịta okwu na Chat Roulette agaghị ahapụ gị enweghị mmasị.Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị nke ndụ kwa ụbọchị ma chọọ ahụmịhe ọhụrụ, mgbe ahụ Chatroulette bụ maka gị.
Oge ọ bụla tupu ịmalite nzikọrịta ozi, ị ga na-atụ anya ụdị onye na-emekọrịta ihe ị ga-ahụ.Ikekwe taa, ị ga-ekwurịta okwu na nwa agbọghọ mara mma, echi, nkata ahụ ga-ahọrọ gị onye na-enwe obi ụtọ nke na-enwe mmasị ịga njem ma na-agwa gị ọtụtụ ihe ọhụrụ na-adọrọ mmasị banyere mba ndị dị anya.Chatroulette bụ nnukwu nnapụta site n'ụjọ na ike ọgwụgwụ.
Ozugbo interlocutor gị pụtara na ihuenyo, ị ga-echefu na ọ bụ ohere mere nhọrọ ahụ.A ga-ehichapụ ebe dị anya, ma ị ga-amalite ịkparịta ụka n'otu ogologo waveleng.
Chatroulette bụ ọrụ pụrụ iche maka nkwurịta okwu na-amaghị aha gị na ndị mmadụ gburugburu ụwa.Ị ga-enwe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ n'aka gị bụ ndị, dị ka gị, chọrọ ime enyi ọhụrụ ma ọ bụ na-awụpụ mkpụrụ obi ha nye mmadụ.Ngwa ahụ nwere nchebe a pụrụ ịdabere na ya, nke mere na ọ nweghị onye na-emekọrịta ihe ga-enwe ike ịchọpụta data gị, ọnọdụ gị ma ọ bụ ozi nkeonwe ndị ọzọ.
N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịmara na saịtị pụrụ iche ma ọ bụ site na netwọk mmekọrịta.Mana nsogbu dị na ọrụ ndị dị otú ahụ bụ na achọrọ ndebanye aha n'ebe ahụ, yana ntinye data gị, dị ka ebe, afọ, agụmakwụkwọ, na ihe ndị ọzọ.Ọ bụghị onye ọrụ ọ bụla chọrọ ịkesa ozi nkeonwe dị otú ahụ, n'ihi na mgbe ụfọdụ ọ nwere ike imerụ ahụ nke ukwuu.
Ngwa Chatroulette na-enye ndị introverts ohere pụrụ iche ịchọta ndị enyi na ịkparịta ụka n'enweghị egwu ọ bụla maka ohere nke onwe ha.A na-enyocha mkparịta ụka a site n'aka ndị nhazi oge niile, yabụ ọ bụrụ na omume onye na-emekọrịta ihe na-adịghị mma, ị nwere ike ime mkpesa banyere ya na ndị nlekọta ga-amachibido ibe ya.
Iji jiri ọrụ ahụ, ịgaghị abanye na ndebanye aha ọ bụla ma ọ bụ mee ka akaụntụ gị rụọ ọrụ.Naanị pịa "mmalite" wee malite ịchọ ndị na-emekọrịta ihe.Mkparịta ụka ahụ na-asụ Russian kpamkpam, mana ọ na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu na mba niile nke ụwa.Ị ga-enwe ike ịchọta ndị enyi na-asụ asụsụ gị wee malite ịkparịta ụka ozugbo.
Enwere ike họrọ ndị na-eme mkparịta ụka na-enweghị usoro.Ọ bụrụ na nkwurịta okwu abanyela na mberede ma ọ bụ na ị naghị amasị onye a, ọ nweghị nkọwa na ịgbachi nkịtị dị mkpa.Naanị kwụsị nkata gị na ya site na ịpị bọtịnụ "Ọzọ".Maka mkparịta ụka, ịnwere ike iji kamera webụ na igwe okwu, ma ọ bụ kparịta naanị site na ozi.
Mkparịta ụka a abụghị naanị onye ozi nkịtị.Ekele dịrị ya, ị ga-enwe ike izute ndị pụrụ iche na ndị dị ịtụnanya si n'akụkụ ụwa niile.N'ebe a ị nwere ike ọ bụghị naanị ide ma ọ bụ kwuo okwu, kamakwa ịkọrọ gị talent na nkà pụrụ iche.Naanị pịgharịa na ndepụta nke ndị ọrụ dị ruo mgbe ị ga-asụ ngọngọ na ihe na-atọ ụtọ ma bara uru.
Iji mee ka ihe oyiyi gị na-egbuke egbuke na nke a na-agaghị echefu echefu na mmetụta mbụ, chee echiche banyere nkọwa niile tupu oge eruo.Gosipụta n'ihu ndị na-emekọrịta ihe n'ụzọ pụrụ iche, na-ewere akwụkwọ ọkacha mmasị gị, ihe egwuregwu ụmụaka dị nro ma ọ bụ naanị anụ ụlọ.Ya mere, ị nwere ike ozugbo ịme echiche ziri ezi, yana ịchọta ezigbo ndị nwere mmasị n'etiti otu nde ndị ọrụ.
Nabata na Chatroulette!Ihe karịrị puku ndị ọrụ 200 na-eleta nkata vidiyo anyị na-amaghị aha kwa ụbọchị.N'ime ha, ị ga-ahụrịrị onye na-amasị gị.
Nke a bụ ọrụ izi ozi vidiyo, nkata vidiyo na-amaghị aha ebe ị nwere ike ịkparịta ụka na ndị si n'akụkụ ụwa niile site na iji kamera weebụ gị.Naanị pịa bọtịnụ "Malite", nkata ahụ ga-ahọrọ gị onye na-emekọrịta ihe n'etiti ọtụtụ narị puku ndị ọrụ.Ị gaghị ama onye ọ bụla gị interlocutor, ma ọ bụ ebe o si.Ma ihe na-adọrọ mmasị karị - ị nwere ike ịmata ibe gị mgbe niile n'oge mkparịta ụka ma chọta mmasị na-amasịkarị.Ọ bụrụ na n'ihi ihe ụfọdụ ị na-adịghị amasị interlocutor, dị nnọọ pịa "Ọzọ" na gaba na-esonụ nke.Ọ dịghị mkpa ịsị nke ọma, rịọ mgbaghara ma ọ bụ mee ngọpụ.
Ikekwe ọ dị oke ọnụ?
Ọbụghị ncha ncha!Mkparịta ụka anyị bụ FREE, amaghị aha na ọ chọghị ndebanye aha mgbagwoju anya.Ọ dịghị mkpa ichepụta na icheta nbanye na okwuntughe, gosi email ma ọ bụ nọmba ekwentị.
Kedu maka nchekwa?
Anyị na-asọpụrụ amaghị aha nke ndị ọrụ anyị: onye na-agwa gị agaghị ama aha gị ma ọ bụ ebe i si, ọ gwụla ma ị họrọ ịkọrọ ha ozi a.Ịkwesighi ịnagide omume nkwutọ ma ọ bụ mkparị nke onye na-emekọrịta ihe.Ọ bụrụ na ọ na-emebi iwu nke nkata anyị ma ọ bụ iwu, ị nwere ike ime mkpesa mgbe niile na onye nhazi, onye ga-atụle mkpesa gị ma gbochie onye na-emebi iwu.
Kedu ihe ịchọrọ ịmalite ịkparịta ụka?
Ịntanetị, kamera weebụ na ọnọdụ dị mma.Ma ọbụlagodi na ịnweghị kamera weebụ, ọ baghị uru, igwe okwu ga-ezuru, ma ọ bụ ị nwere ike iji nkata ederede na windo n'aka nri.Agbanyeghị, cheta na ndị mmadụ na-abịa na nkata vidiyo bụ isi ka ha hụ onye na-emekọrịta ihe, yabụ igwefoto agaghị adị oke egwu.
Onye ga-akpakọrịta mụ na ya?
N'ebe a, ị ga-adabere na ọchịchọ nke ohere ebube ya.Ọ bụrụ na ị naghị amasị otu onye na-emekọrịta ihe, ị nwere ike ịga n'ihu na nke ọzọ.Chatroulette bụ nkata vidiyo kachasị ukwuu nke ndị ọrụ ya na-asụ Russian, yabụ ịkwesighi icheta ahịrịokwu sitere na akwụkwọ akpaokwu bekee - ha ghọtara gị ebe a!
Kedu ka esi eme enyi na nkata?
Dị mfe dị ka achịcha!Malite nkata site na ịpị bọtịnụ "Malite", mụmụọ ọnụ ọchị ma kwuo "Hi!".Echela ụzọ n'aka onye na-emekọrịta ihe, gosi ya na mbụ.Ihere na-eme anyị niile ịmalite mkparịta ụka, mana ebe anyị mere nzọụkwụ mbụ, anyị ghọtara na anyị na-atụ egwu nke ukwuu n'efu.Cheta: onye ọ bụla hà nhata na nkata.Ndị ọrụ anyị niile nọ ebe a maka otu ebumnuche dị ka gị - iji nọrọ awa ole na ole, izute ndị na-adọrọ mmasị wee nweta akụkụ nke ọnọdụ dị mma.Jisie ọma na nkwurịta okwu na ezigbo ndị enyi!
Chatroulette KuMit - izute ụmụ agbọghọ na kamera weebụ
Ị na-achọ ụzọ ngwa ngwa iji zute nwa agbọghọ mara mma ma mara mma?Web chat roulette CooMeet (ụdị bekee nke CooMeet) na-enye gị ohere ịmekọrịta nwoke na nwanyị mara mma sitere na mba dị iche iche na-ahapụghị ụlọ gị.Njikọ ngwa ngwa, ọkpụkpọ vidiyo dị elu dị elu, enweghị nchekasị yana naanị ndị na-emekọrịta ihe kacha mma ga-eji ọchị na-ezute gị mgbe niile.
Anyị maara otú oge bara uru taa: a na-amanye anyị mgbe niile ka anyị na-ebute ụzọ, chekwaa na ọsọ ọsọ, ma ka na-enweghị oge iji mee ihe niile anyị zubere.N'ọgba aghara a, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mmekọrịta na-abụkarị oche azụ.Webụsaịtị KuMit gọọmentị na-ekwe nkwa nkwurịta okwu dị elu naanị na ụmụ agbọghọ tụkwasịrị obi - nzukọ ntanetị, ndị enyi ọhụrụ na ọmarịcha ọnọdụ.
Naanị otu ọpịpị - na usoro nhọrọ anyị nwere ọgụgụ isi ga-ejikọ gị na otu puku ndị ọbịa mara mma.Jide n'aka na ụmụ agbọghọ niile bịara ebe a izute, kparịta ụka ma wulite mmekọrịta.Ọ nweghị ọrụ efu nwere ike ịnye otu ọkwa dị elu dị ka KuMit Chat:
ntuziaka ntuziaka nke onye ọ bụla edebanyere aha nwa agbọghọ;
ngwa ngwa dozie esemokwu ọ bụla;
mmachibido iwu maka mmebi iwu nke ọ bụla nke chatroulette;
mmepe na-aga n'ihu na nkwalite ọrụ nke saịtị ahụ.
Nhọrọ kacha mma maka Omegle na ChatRoulette
Onye ọ bụla nwere mmasị na roulette online nwere ike icheta mkparịta ụka ndị ahụ guzoro na mmalite nke nkwurịta okwu enweghị usoro.Ndị a bụ Omegle na ChatRulet, nke pụtara laa azụ na 2022.Nke mbụ si mba ọzọ bịakwute anyị, nke abụọ bụ echiche nke nwa akwụkwọ Russia bụ Andrei Ternovsky.
Mkparịta ụka weebụ abụọ a gbadoro ụkwụ na otu ụkpụrụ: nkwurịta okwu na ndị na-emekọrịta ihe na-enweghị usoro sitere n'akụkụ ụwa niile.Ma ọ bụ ezie na Omegle nwere isi mmalite nke ọtụtụ ọnwa, ọ bụ ChatRoulette na-achị roost ruo ogologo oge.Agbanyeghị, ma nkata-randoms abụọ mechara nwee otu “ọrịa” ahụ, bụ nke ka na-enwe nsogbu ma na-egbochi ọtụtụ ndị iji ha.
Nke a, n'ezie, gbasara ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị.N'ime ụwa dị mma, ndị nwere ezi uche na ndị enyi na-achọ ịmatakwu onwe ha, na-ekwurịta okwu, na-enye ibe ha obi ụtọ kwesịrị ịbanye roulette video.N'ezie:
Ọtụtụ mgbe ị na-abịa gafee exhibitionists ndị chọrọ igosi apụ ha omume ọma na a random interlocutor;
nwa agbọghọ mara mma nwere ike ịghọ onye nnọchianya nke ọrụ kacha ochie na-enye ọrụ mmekọrịta;
Njikọ ọzọ ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ onyonyo kwụ ọtọ ma ọ bụ vidiyo nwere ọdịnaya mgbasa ozi naanị.Ee, ị nweghị ike ịgọnarị echiche efu ndị PR.
Mgbe ahụ, ọ bịara doo anya na ọ dị mkpa nhọrọ ọzọ kwesịrị ekwesị - nkata vidiyo na-enweghị usoro, na-abanye nke ị na-enweghị ike ichegbu onwe gị banyere onye ga-anọ n'akụkụ nke ọzọ nke ihuenyo ahụ.Na n'ihu n'etiti nkata vidiyo ewepụtara bụ KuMit.
Ọ bụ nhazi nke ndị sonyere na usoro ndị e mere n'oge maka mmebi ọ bụla bụ ihe ngwọta maka nsogbu mgbu nke ọrụ ndị yiri ya.Site na mmalite, anyị maara nke ọma na ọ gaghị ekwe omume ịgụta na akpaaka zuru oke nke usoro a - anyị chọrọ ọrụ mmadụ dị elu ka ndị ọrụ wee ghọta uru na uru nke saịtị ha na-eji.Mgbalị ahụ rụpụtara rụpụtara ya.
Taa - KuMit bụ otu n'ime nkata weebụ kachasị mma yana enweghị nchekwa.Na onye ọ bụla nwere ike ịchọpụta nke a.Naanị pịa "Malite Chọọ" wee gbalịa online roulette na ụmụ agbọghọ.
Ụmụ agbọghọ Russia kacha mma na ntanetị
Ịchọta ịhụnanya na iwulite mmekọrịta adịla mfe kemgbe ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị malitere ịmalite n'ịntanetị.Na chatroulette aghọwo ngwá ọrụ dị ukwuu maka ebumnuche ndị a, ịbanye na netwọk mmekọrịta na saịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.Mana n'adịghị ka nke abụọ gara aga, ọ bụ na mkparịta ụka vidiyo ka ị nwere ike ịhụ anya onye na-ekwu okwu mara mma, ịmụmụ ọnụ ọchị ma nwee mmetụta nke enweghị ike ịkọwa site na nso nso ọbụna n'ebe dị anya nke narị narị kilomita.
Ka nọ na obi abụọ?Jikọọ n'efu wee malite ịkparịta ụka na ụmụ agbọghọ na nkata vidiyo anyị na-enweghị usoro ugbu a na-edeghị aha na dejupụta profaịlụ.Naanị ị chọrọ kamera weebụ ka ịmalite nkata vidiyo KuMit.Ma ọ bụrụ na mberede onye na-emekọrịta ihe adịghị amasị gị - gbanwee gaa na onye ọbịbịa ọhụrụ site na ịpị otu bọtịnụ.Ụmụ agbọghọ si n'akụkụ ụwa niile na-echere gị!
Otu esi etinye aka na nkata-roulette onye ọzọ maka ịkpa ọchị
Ndewo ezigbo enyi m, taa, m ga-agwa gị otu obere nzuzo nke ọtụtụ ndị na-akpa nkata chatroulette na-ezo , na onye na-arịọ maka nzuzo a otu pukundị debanyere aha (ndị debanyere aha),ma ekpebiri m ịkọrọ ozi a bara uru n'efu karịsịa maka gị.
Achọrọ m ịkọwara gị nkọwa ozugbo:N'ezie, anyị agaghị enwe hacking ọ bụla, mba mba!ị na-adịghị ngwa ngwa na-ahapụ na peeji nke, ma na-agụ nke ọma, anyị ga-nnoo bụghị mbanye anataghị ikike, ma relay abụọ interlocutors ọ bụla ọzọ.Mbụ ịkwesịrị ịkwadebe
Enwere ike ime nke a, n'ezie, n'ụzọ dị iche, ma m ga-egosi ya site na iji ihe atụ nkeOBS - Studio
Igwe olu (n'efu)VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable:VoiceMeeter Virtual Cable
Ihe nchọgharị abụọ: Dịka ọmụmaatụ, Google Chrome na Opera (Ịkwesịrị ịhọrọ ihe nchọgharị ndị ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na chatroulette)
Mgbe ị wụnye igwefoto obs mebere, ọ dị mkpa ịwụnye igwefoto 4 (ọ bụ ezie na ọ bụ naanị 2 ka a ga-achọ) Igwefoto 2 ọzọ nwere ike ịba uru maka ihe ọzọ.
Dị ka iwu nke Chatroulette, ọ bụ n'ezie amachibidoro iji webcam emulators, na Chatroulette n'ezie na-alụ ọgụ megide nke a, gụnyere ihe mgbochi akaụntụ (Lezienụ anya), ma anyị bụ hackers, nri?anyị kwesịrị ijide n'aka na a ghọtara igwefoto mebere anyị dị ka ezigbo anụ ahụ, anyị ga-eji gị mee obere aghụghọ na nchịkọta akụkọ ndekọ.
Yabụ, iji mepee editọ ndekọ a (regedit) ịchọrọ ikike onye nchịkwa sistemụ, ma ọ bụghị ya, mgbanwe ndị a agaghị eme n'ụzọ ọ bụla ọbụlagodi ịmalitegharị kọmputa ahụ.
Anyị na-abanye na nchịkọta akụkọ ndekọ: Ma ọ bụ Win + R bọtịnụ ga-emepe windo nke anyị na-ede regedit na mebie, ma ọ bụ ọbụna dị mfe n'ọhịa ọchụchọ (chọta mmemme na faịlụ), dị nnọọ dee regedit wee pịa ụzọ mkpirisi.
Na ndekọ nchịkọta akụkọ: Anyị kwesịrị ịchọta OBS - Virtual (ị nwere ike ihichapụ folda niile ma ọ bụ gbanwee aha ha, dịka ọmụmaatụ, na Mycamera) ọzọ, anyị kwesịrị ịchọta igwefoto OBS anyị 1/2/3/4 na nchịkọta akụkọ ndekọ na gbanwee aha ha ka ọ bụrụ nke anyị, dịka ọmụmaatụ OLDcamera1 wdg.Ọ dị ezigbo mkpa ịmara ihe ị na-eme!ma ọ bụghị ya, ị nwere ike imebi ndenye ndekọ na inweghachi igwefoto anyị.
Ọ bụrụ na ịmere ihe niile n'ụzọ ziri ezi, mgbe ahụ ka ịmalitegharịa chatroulette na ihe nchọgharị ahụ, na ala a ga-enwe nhọrọ nke igwefoto na igwe okwu anyị.Ọ bụrụ na ihe nchọgharị ahụ, ị ​​​​na-enye ohere ịnweta igwefoto na igwe okwu.
Ọ bụrụ na emechara mmegharị ahụ niile ị nweghị igwefoto mebere na chatroulette, mgbe ahụ ị na-eme ihe na-ezighi ezi: anụ ahụ, yabụ n'ụzọ ọ bụla a ga-ewepụ ya n'ebe ahụ!Ihe bụ na chatroulette (ee, ya ejula gị anya) nwere igwefoto nhọrọ algorithm nke nwere ihe dị elu, ya bụ, ezigbo kamera weebụ gị nwere ihe kachasị mkpa na chatroulette na ya mere ọ gaghị adị na ihe nchọgharị ahụ.
Ihe dị mkpa!mkpa ka ị abanye na chatroulette n'okpuru dị iche iche akaụntụ:Ma nchọgharị ekwesịghị overlack ọ bụla ọzọ
Iji zere njehie: Chatroulette na-emeghe na windo ọzọ / ihe nchọgharị, anyị ga-achọ ihe nchọgharị abụọ na akaụntụ abụọ (vk/fb)
Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ ma ọ bụ na ị chọghị ịnweta mmachibido iwu na isi, m na-adụ ọdụ ka ịzụta nọmba, zụta nọmba, ma mepụta adịgboroja abụọ - nke a bụ ihe dị mkpa!ikike na chatroulette naanị site na VKontakte ma ọ bụ Facebook
Ọ dị mma, ọ dị ka usoro ndị siri ike agafeela:Ọ bụ oge ịtọlite ​​​​obs maka ihe nchọgharị anyị, maka trolling na chatroulette: Mepee obs anyị wee mepụta ọnọdụ maka ihe nchọgharị mbụ na kọlụm ọnọdụ (ka anyị kpọọ ihe nchọgharị mbụ, dịka ọmụmaatụ. , N'ebe ahụ na kọlụm ebe ahụ, pịa ebe a na-emepụta -> nzacha -> igwefoto mebere -> họrọ igwefoto mbụ, wee echefula ịpị mmalite! Ma ọ bụghị ya, na ihe nchọgharị mbụ na roulette nkata na igwefoto mbụ. a gaghị enwe ihe ọ bụla ma e wezụga windo mmalite nke roulette chat n'onwe ya.
Kpọọ igwefoto ndị dị na nzacha site na aha ha kwesịrị ekwesịka ị ghara inwe mgbagwoju anya ihe na ebe: Dịka ọmụmaatụ(igwefoto mebere 1 chrome)ugbu a na windo isi mmalite nke OBS mbụ anyị, ị ga-ahọrọ ijide windo (anyị ga-ejide windo 1). nke ihe nchọgharị anyị na roulette nkata anyị.
Ekwesịrị imechi taabụ ndị ọzọ ka ngafe ghara ịbanye n'ikuku.Mgbe ịtọlitechara isi mmalite na igwefoto, mepee roulette nkata (Banye na akaụntụ VK / FB) họrọ igwefoto mbụ anyị na windo nhọrọ roulette nkata - dị ka ewepụtara ya na OBS mbụ anyị Ka anyị leba anya n'ihe anyị nwetara.
Ọ dị mkpa iji nkata-roulette weghara windo!Enwere ike ịhazi taabụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na emechighị ya
Ugbu a na obs nke mbụ na windo isi mmalite, anyị kwesịrị ịkụ mkpụrụ (ihe ubi) nke mere na na ihe nchọgharị mbụ anyị na-agbanye igwefoto mbụ, enwere naanị otu cha cha cha cha cha cha cha na-enweghị njikwa.N'ebe a, ị ga-akpachara anya ma jide n'aka na ọ dịghị ọnyá ojii na-apụta, ma ọ bụghị ya, prank anyị ga-ere ọkụ.
N'ebe a, ntọala ihe ọkụkụ niile n'otu n'otu na-adabere na otu ị na-etinye ihe nchọgharị abụọ ahụ n'otu n'otu.
Ugbu a, anyị na-ahụ ihe oyiyi anyị nke ọma!a ghaghị ịgbatị ya nke ọma, ma ọ bụghị site na ịdị arọ nke ihuenyo mmemme OBS, ma ka anyị ghara ịrahụ ụra na igwefoto a, ya bụ, ka cha cha cha cha nwee oghere isi awọ ha na-enweghị ogwe ojii gburugburu n'akụkụ.
Nakwa na ntọala mgbe ị na-akụ mkpụrụ -> ịkwesịrị ime mgbanwe -> tụgharịa n'akụkụ ma ọ bụrụ na ịmeghị ya, a ga-enwe ụdị mmetụta mirroring na nke a ga-enye anyị 100%
Ọ bụrụ na i mere dịka m na-edegara gị akwụkwọ ebe a: Mgbe ahụ ị ga-enweta ihe dị ka na nseta ihuenyo m.
Lifehack mgbe ị na-agbatị foto na obs,ọ bụrụ na ị na-ejide bọtịnụShift, mgbe ahụ, ị ​​​​na-agbatị ntakịrị ka mma, na site na ijide alt na ịgbatị, ị ga-akụ osisi ahụ n'ebughị ihe osise ahụ.Site na aghụghọ a, ị nwere ike ịnwa iwepu ngafe na etiti ahụ.Ọzọ, kpachara anya mgbe ị na-agbatị, gbalịa mee ka ọ dị nro ka onye ahụ dị na etiti ahụ ghara ịkatọ ma ghara ịgbatị ya, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ọla edo pụtara.
Ihe kacha mkpa!na ma obs, anyị na-mkpa ịtọ ọzọ isi iyi, ma gị ezigbo webcam ma ọ bụ video, ma ọ bụ ụfọdụ ụdị screamer na melite idaha ịgbanwee nke mere na ọ na-eme ozugbo.
Anyị ga-emeghachi otu usoro ahụ na ihe nchọgharị nke abụọ na na nke abụọ obs dị ka ọ dị na mbụ, naanị site na ịhọrọ igwefoto obs nke abụọ ugbua nọ na ọnọdụ ahụ.Ya mere, anyị na-enweta relaying nke interlocutors!Kedu onye ga-eche na ha na-akụ mmadụ na mberede, ma n'ezie ị na-achịkwa mgbanwe nke ndị na-emekọrịta ihe.Mystic dị otú ahụ :)
O yiri ka anyị emeela ihe niile, ma e nwere otu nnukwu ma!Ndị na-akpakọrịta anyị agaghị anụ ibe ha, maka ebumnuche ndị a, anyị chọrọ mmemme dị ka: Voicemeter VoiceMeeter na VoiceMeeter Virtual Cable na-enweghị mmemme ndị a, ndị na-emekọrịta ihe agaghị anụ ibe ha n'ụzọ ọ bụla.
Budata ma wụnye mmemme anyị, nye ha ohere: wee gaa n'ihu na ntọala ụda.Ọ dị mkpa ịhọrọ igwe okwu anyị n'otu akụkụ(ka anyị nwee ike itinye aka n'oge ọ bụla na mkparịta ụka)Echefula ịgbanye ụda olu olu na panel njikwa ụda, ma ọ bụghị ọbụna mgbe ntọala ahụ gasịrị ụda agaghị arụ ọrụ.
Anyị na-emeghe ihe omume Voicemeeter maka igwe okwu: na paramita mbụ anyị na-etinye igwe okwu anyị, na nke abụọ na A1 - ndị na-ekwu okwu gị na A2 - KS: VB-audio Point, nke ahụ bụ ihe niile ụda kwesịrị ịrụ ọrụ maka ndị ọrụ abụọ abụọ gụnyere gị.
Ihe dị obere: Dị ka m dere n'elu, ịkwesịrị ịkwadebe ebe ọzọ ebe ma ezigbo kamera weebụ gị ga-emeghe ma ọ bụ ihe ọzọ, dịka ọmụmaatụ, onye na-eti mkpu, kpachara anya - ndị na-eti mkpu n'ihi na ọ bụghị mmadụ niile nwere obi siri ike.
Echefula ịtọkwa ọnọdụ ahụ na-agbanwe na hotkeys ka ndị anyị na-atụghị anya ya ghara inwe obi abụọ na nke a bụ ụdị ihe omimi :) A na-eme ntọala ahụ na hotkeys.
Chatroulette maka gam akporo
Chatroulettebụ onye njikwa efu maka iso ndị ọbịbịa na ndị enyi na-ezute n'ịntanetị.Achọghị ndebanye aha, mgbe echichi, ị nwere ike jikọọ ozugbo na interlocutor.
Nkata nkata vidiyo nwetara ewu ewu dị ka ntụrụndụ, mana ọrụ ahụ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.Ma ndị Russia na ndị bi na mba ọzọ kwa oge na-abịa ebe a na-achọ onye òtù ọlụlụ, ya mere nkata roulette na-eleta ihe karịrị puku mmadụ 200 kwa ụbọchị ma ọnụ ọgụgụ ahụ na-aga n'ihu.
Chatruletka maka gam akporo bụ mkparịta ụka na-amaghị aha gị na ndị ị na-agaghị ezute na ndụ n'ezie.Ụzọ a anaghị ebu ndị ọrụ ibu ihe ọ bụla ma ọ dịghị etinye ọrụ ọ bụla.
Njirimara ngwa Chatroulette:
ngwa ngwa search;
mba nile nke ụwa;
ọtụtụ ndị na-adọrọ mmasị;
arụ ọrụ kwụsiri ike;
Maka ọrụ zuru oke, ọ dị mkpa ịnye ngwa ahụ ohere ịnweta data achọrọ.N'okpuru windo vidiyo enwere nkata ederede, ya bụ, ị nwere ike ọ bụghị naanị na-ekwu okwu na igwe okwu, kamakwa na-edekọ ya na onye na-emekọrịta ihe.Enwere ike gbanwee ma megharia nha Windows.
Ọrụ Chatroulette na-ewu ewu na-adaba adaba n'ihi amaghị aha, ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ịgbanwe obodo obibi na mpaghara ọchụchọ.Onye ọ bụla nwere ike inwe onwe ya na nkata ahụ.Ọ na-atọ ụtọ mgbe niile iwepụta oge ebe a.
Iji nwee mmasị na ndị ọrụ, ị nwere ike wepụta onyonyo na-egbuke egbuke ma ọ bụ soro ndị ọzọ kerịta ihe omume ntụrụndụ gị, ụfọdụ na-enwe mmasị ịhazi egwu egwu ma ọ bụ mmemme ịntanetị na-eme mkpọtụ.
Chatroulette maka gam akporo bụ ebe ị nwere ike zuru ike wee nwee ọmarịcha oge, chọta onye òtù ọlụlụ gị, ma ọ bụ ọbụna nwunye mkpụrụ obi.Enwere ike iji ngwa a naanị ụmụaka nwere ikike nne na nna, ma ọ bụ site na njikwa nne na nna.
Iji wụnyeChatruletkaịkwesịrị ibudatangwa a
Ị nwere ike ibudata Chat Roulette maka gam akporon'efu na Russian n'okpuru site na njikọ kpọmkwem.